कुमार सानुका छोरा भन्छन्: “उहाँ महान गायक हुनुहोला तर हाम्रो लागि कुनै कर्तब्य-पुरा गर्नुभएन”
[ October 27, 2021 ] घरको भित्ता भत्किँदा पुरिएर महिलाको मृ’त्यु’ समाचार
[ October 26, 2021 ] अन्ततः भरतमणीले भेटे पारस शाहलाई, पारसले के छ यार भन्दै भारतलाई अंगालो मरेपछि (भिडियो हेर्नु`स्) समाचार
[ October 26, 2021 ] दाङमा पक्रा`उ परेका यी महिला जसलाई धनि र राम्रा युवक त देख्न नै हुन्थेंन… समाचार
[ October 26, 2021 ] अमेरिकाबाट भाइ`रल जोडिको घर हेर्न आए ,यस्तो घर बन्यो ,सुत्ने कोठा यस्तो (हेर्नु|स् भिडियो ) समाचार
[ October 26, 2021 ] बाँदरलाई अलमल्याउन वनमै फलफूल खेती समाचार
Homeसमाचारकुमार सानुका छोरा भन्छन्: “उहाँ महान गायक हुनुहोला तर हाम्रो लागि कुनै कर्तब्य-पुरा गर्नुभएन”
November 23, 2020 admin समाचार 6745
चर्चित गाय’क कुमार सानुले छोरा जान कुमा’रसंग २७ वर्ष देखि भेटेका छैनन् । जान कुमार ‘बिग बोश’ कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । सो कार्यक्रममा उनलाई अर्का प्रतियो’गिले नातावादको विषय उठाएका थिए ।
बुवा कुमार सानुका कारण उनले बिग’वोशमा आउने अवसर पाएको भन्दै टिप्पणी गरेका थिए । उनको त्यस्तो टिप्प’णीमा कार्यक्रम सञ्चालक सल’मान खानले पनि टिप्पणी गरेका थिए ।
हालै जान कुमारले बुवासंग २७ वर्ष देखि भेट नहुनुको कार’ण खुलाएका छन् । उनले भनेका छन्, बुबा देशका चर्चि’त गायक भए पनि उहाँ आफ्नो छोरालाई २७ वर्ष देखि भेट्नुभएको छैन । आज हामी जे छौं हामी आमा रीताको कारण’ले हो ।
रिता र कुमार सानुको स’म्बन्ध वि’च्छेद भएको छ । तर तीन सन्तानको जिम्मेवारी रिताले लिएकी हुन् । उनीहरु आ’मासंगै बस्छन् । उनले भनेका छन्, हामी तीन जना भाइ छौं।
आमा रीता भट्टाचार्यले हामी तीन जनालाई एक्लै हुर्काउनुभयो। मेरो बुबा मेरो जीवन’को हिस्सा हुनुहुन्न। मलाई थाहा छैन किन उहाँले मलाई कहिल्यै समर्थ’न गर्नुभएन वा मलाई प्रमोट गर्नुभएन ।
तपाईहरुले बुवालाई नै सोध्न सक्नुहुनेछ । कलाकारीतामा धेरै कलाकारहरु छन् जसले सम्बन्ध’विच्छेद गरे र दोस्रो विवाह गरे। उनीहरूले पहिलो श्रीमतिसंग कुनै सम्ब’न्ध नराखेपनि छोराछोरीको भने पूर्ण जिम्मेवारी लिएका छन् । आफ्ना सन्तानको भवि’ष्यका लागि कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् ।
ुतर हाम्रो त्यस्तो अव’स्था होइन । मेरो बुबा कुमार सानुले हामीसँग कुनै सम्प’र्क राख्नुभएन। केही समय अघि उहाँले मेरो बाल्यकालको एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सा’र्वजनिक गर्नुभएको थियो ।
मलाइ लाग्यो बुवाको मन पग्लियो । उहाँले फेरी मेरो कामलाई समर्थन गर्दै अर्को भिडियो पनि सार्व’जनिक गर्नुभयो । बुवा परिवर्तन हुँदै हुनुहुन्छ भन्ने लागेको थियो । तर त्यस पछि ृहाँसंग हाम्रो सम्पर्क छैन ।
ुमलाई पनि लाग्छ कि आफ्ना बच्चाहरू’प्रति बुबाको रिस यति लामो समयसम्म हुँदैन । पार्ट’नरसँग मतभेद हुन सक्छ, तर सबै जोडीहरूले आफ्ना बच्चाहरूले यसको परि’णाम भोग्नुपर्नेछ भनेर कहिले सोचेका थिएनन्।
यसैले गर्दा मलाई अनौठो लाग्छ जब मानि’सहरूले मलाई नातावादको कुरा गर्छन । मैले आफ्नै मेहन’तले आफ्नो स्थान बनाएको छु र भविष्यमा पनि जारी राख्नेछु ।- इताजा खबर बाट
पल शाह र दीपिका प्रसाइको अभिनय रहेको ‘हिरो हिरोनी’ गीत सार्वजनिक(भिडियो हेर्नुहोस्)
कृष्णको गीतमा बिशाल र करिस्माको रोमान्स(भिडियो हेर्नुहोस)
April 8, 2021 admin समाचार 3822
शिशिर भण्डारी र उनकी श्रीमतीको यति अ’नौठो पहिलो भेट, शिशिरको कार्यक्रममा श्रीमतीले फोन गर्थिन (भिडियो हे’र्नुहोस)
May 17, 2021 admin समाचार 2897
लकडा’उनको समय छ, केहि मनोरन्जनात्मक सा’मग्रीहरु प्रस्तुत गर्ने युटुबरहरु यो समयमा बि’भिन्न रमाईलो बिषयवस्तु प्रस्तुत गरी दर्शकहरुलाई रमाई:लो गराउँदछन् । यसैबिच युटुबमा शिशिर भण्डारीले आफ्नो श्रीमतीको अगाडी उठ’बस गरेको भिडियो बाहि’रिएको छ । शिशिरले श्रीमतीको
September 14, 2020 admin समाचार 11363
चर्चित नायिका निता ढुंगाना’को आज जन्मदिन परेको छ । जन्मदिनको अवस’रमा नायिका ढुंगाना’लाई बिहानैदेखि समा’जिक संजालमा शुभ’कामनाको ओइरो लागेको छ । १९९१ मा जन्मिए’की निता २९ बर्ष पुरा भएकी छन् । उनि बालकलाका’रको रूपमा नेपाली
घरको भित्ता भत्किँदा पुरिएर महिलाको मृ’त्यु’
अन्ततः भरतमणीले भेटे पारस शाहलाई, पारसले के छ यार भन्दै भारतलाई अंगालो मरेपछि (भिडियो हेर्नु`स्)
दाङमा पक्रा`उ परेका यी महिला जसलाई धनि र राम्रा युवक त देख्न नै हुन्थेंन…
अमेरिकाबाट भाइ`रल जोडिको घर हेर्न आए ,यस्तो घर बन्यो ,सुत्ने कोठा यस्तो (हेर्नु|स् भिडियो )
बाँदरलाई अलमल्याउन वनमै फलफूल खेती
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (220455)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (212113)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (211813)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (210561)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (209347)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (208470)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (206947)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (206736)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (194619)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (175644)